Fandrindrana amin'ny maso-maso - pejy fandokoana maimaim-poana ho an'ny ankizy
Keyword: Fandrindrana amin'ny maso
Fandrindrana amin'ny maso-maso - inona marina izany
Ny ray aman-dreny dia mihaona hatrany amin'ny fandrindrana ny maso. Na amin'ny lalao ilaina amin'ny fanabeazana (eto matetika dia hoe: mandrisika ny fandrindrana ny maso-maso) na eo amin'ny sehatry ny fitsaboana asa amin'ny toe-javatra tsy ara-dalàna ao amin'ny zaza.
Fanazavana fohy: fandrindrana ny maso-maso
Fandrindrana-maso - sary avy amin'i RitaE amin'ny pixel
Fa farafaharatsiny fantatr'izy ireo izay tena ao ambadik'izany. Ny fandrindrana ny maso dia an'ny sehatry ny fahaiza-manao visuomotor. Io no fandrindrana ny fomba fijery hita maso (hita maso) sy ny tena. Ny fiasan'ny visuomotor dia tokony horaisina ho toy ny asan'ny ati-doha izay tsy tonga saina.
Ohatra iray amin'ny fandrindrana ny maso-maso "Fandrindrana amin'ny maso - inona marina izany" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 12. September 2020 16. Oktobra 2020 Sokajy fahasalamana sy sakafo mahavelonaKeywords Fandrindrana amin'ny maso, Fahaiza-manao maotera tsara, Fahaiza-moto mahery vaika, Fahaiza-moto, Fahaizana Visuomotor, fomba fijeryLeave a Comment amin'ny fandrindrana ny maso-maso - inona marina izany